Haingam-pandeha Single Screw Extruder PE / PP Double Wall Corrugated Pipe Production Line - China High Speed ​​speed
Ny tsipika fantsom-pilao dia ny taranaka faha-3 amin'ny vokatra nohatsarain'ny Suzhou Jwell. Ny fivoahan'ny extruder sy ny hafainganan'ny famokarana ny fantsona dia nitombo 20-40% raha oharina amin'ny vokatra teo aloha. Ny fanamafisam-peo an-tserasera dia azo tanterahina mba hiantohana ny fahombiazan'ny vokatra fantsona mihombo. Manangana ny rafitra Siemens HMI.
● Ilay milina famolavolana mihidy vao namboarina dia manana rafitra fihenam-bidy avo lenta manokana amin'ny famolavolana ireo modely aliminioma, izay manatsara be ny fahombiazan'ny fihenan-tsakafo amin'ny famokarana vokatra fantsona mihombo;
● Masinina hafainganam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha avo lenta izay manohana endrika endrika matihanina amin'ny bobongolo fantsom-panafody mihombo mba hahatratrarana fitrandrahana tsy miovaova;
● Fifanakalozana tsara ny maody; ny modely fananganana aliminioma dia mampiasa fitaovana aliminioma fiaramanidina avo lY12 avo lenta miaraka amin'ny atiny varahina ≥ 5%, fizotran'ny fanerena faneriterena, fitaovana avo lenta, tsy misy pores-pahazavana, tsy mora simba ny fampiasana maharitra. Afaka manamboatra endrika maodely isan-karazany mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpampiasa;
● Manohana ny fanapahana DWC mandeha ho azy, ny fibaikoana ny solosaina, ny toeran'ny fanapahana marina, ny fihazakazahana ary mora ny miasa.
PET tavoahangin-tantely tavoahangy & Pelletizing Series